အသက် ၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်မှာ ဒီလိုအရာတွေနားလည်ထားဖို့လိုပြီ ! – Trend.com.mm
အသက် ၃၀ မှဘ၀ကစတယ် ဆိုတဲ့စကားကိုကြားဖူးကြမှာပါ။ဒီလိုအသက်အရွယ်ဆိုတာ ငယ်လည်းမငယ်၊ကြီးလည်းမကြီးပဲ တကယ့်ဘ၀အစစ်ကိုခံစားနားလည်နိုင်တဲ့အရွယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါပဲ။ဒီတော့ အသက် ၃၀အရွယ်မှာ မသိမဖြစ်သိထားသင့်တဲ့အရာတွေကိုလည်း လက်လွှတ်လို့မဖြစ်ပါဘူး။ဘာတွေလဲဆိုရင်…
လုပ်သင့်လို့ဆိုတာတွေထက် အသက် ၃၀အရွယ်မှာ ကိုယ်တကယ်ပျော်ရွှင်စွာလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်က ဘာလဲ၊ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားက ဘယ်နေရာကိုပိုပြီးအလိုရှိနေလဲဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သိထားဖို့လိုနေပါပြီ။အဲ့ဒါမှ ဘ၀ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအစစ်အမှန်ကိုခံစားရမှာပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်တတ်တယ်ဆိုရင်တောင် တစ်ခြားသူတွေထက်ပိုသာတဲ့၊ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာတစ်မျိုးဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။အထူးပေါ့။ကဲ ဘယ်လိုလဲသင်ယူဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီလား?
*ဘယ်သူက တကယ့်သူငယ်ချင်းအစစ်လဲဆိုတာ နားလည်သင့်နေပါပြီ
ကိုယ့်အနားမှာဝိုင်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေထဲက ဘယ်သူက ကိုယ့်အပေါ်တကယ်ကောင်းတယ်၊ဘယ်သူက ဟန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ခွဲခြားတတ်ဖို့လိုသလို ကိုယ့်ဘေးနားမှာ မလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုလည်းဖယ်ထုတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘ၀ရဲ့ အစမှာ သူငယ်ချင်းအတုတွေမလိုအပ်တော့ဘူးမဟုတ်လား
ငယ်ငယ်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုအသေးစိတ်ပြောပြတာမျိုးရှိတတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ ၂၅ ကျော် ၃၀ ဆိုတဲ့အသက်အရွယ်မှာတော့ ရင့်ကျက်စွာနဲ့နေထိုင်သင့်ပါပြီ။သူများကိုပြောပြဖို့မလိုအပ်တဲ့အကြောင်းတွေ၊ပြောမပြသင့်တော့တဲ့အရာတွေဆိုတာ လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဒါတွေကို ပါးပါးနပ်နပ်နဲ့ကိုင်တွယ်ပြောပြသင့်ပါတယ်။ကိုယ့်အကြောင်းကို တစ်လုံးမချန်ပြောပြတာက ကိုယ့်အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာ ချပြနေသလိုပါပဲ။
ငွေကြေးရှာဖွေပြီး ရလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ ခရီးထွက်တာမျိုးကသာ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ၊ခံစားမှုအသစ်တွေလက်တွေ့ခံစားသိမြင်နိုင်မှာပါ။ရလာတဲ့လစာဝင်ငွေရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကို အမြဲစုထားပြီး ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံခရီးလမ်းသစ်တွေကို လျှောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ကိုယ်ဟာ အနာဂတ်မှာဒီထက်ပိုတောက်ပဖို့ကြိုးစားနေသူဆိုရင် အသက် ၃၀အရွယ်မှာ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကတော့ ပိုင်ဆိုင်ထားသင့်ပါပြီ။ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အနာဂတ်ပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက်တွေကို တစ်ခုချင်းစီကြိုးစားဖန်တီးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ အလုပ်တစ်ခုလောက်နဲ့ပဲတင်းတိမ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းအသက်အရွယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်အတွက်တကယ်လိုအပ်တဲ့ အရာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာသိလာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါ အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့မရတော့ပါဘူး။နောက်ထပ် အပိုအလုပ်တစ်ခု၊၀င်ငွေရနိုင်တဲ့တစ်ခြားအပိုအလုပ်တစ်ခုခုကို သင့်အနေနဲ့ရှာဖွေလာပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်း အခုကတည်းက ရှိလိုက်ပါတော့။ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွှတ်မခံပဲ ကြိုးစားလိုက်ပါ
အရွယ်ရောက်လာတဲ့သူတိုင်းမှာ ကိုယ့်အတွက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပုံစံဆိုတာရှိထားဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်က ဘယ်လိုပုံစံဝတ်ရတာ သဘောကျတယ်။ဘယ်ဝတ်စုံနဲ့ဆို သက်တောင့်သက်သာရှိတယ်။ပိုပြီးစိတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတယ်စသဖြင့် ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်သိအောင်ကြိုးစားပါ။အဲ့ဒါမှဘယ်လိုအ၀တ်အစားမျိုးကို ပိုပြီးဝယ်သင့်တယ်။ပိုပြီးရွေးချယ်သင့်တယ်ဆိုတာ သိလောမှာပါ။ဒါကလည်း အသက် ၃၀ဆိုတဲ့အရွယ်မှာရှိထားသင့်တဲ့ ရင့်ကျက်မှုတစ်ခုပါပဲ
အသကျ ၃၀ မှဘဝကစတယျဆိုတဲ့စကားကိုကွားဖူးကွမှာပါ။ဒီလိုအသကျအရှယျဆိုတာ ငယျလညျးမငယျ၊ကွီးလညျးမကွီးပဲ တကယျ့ဘဝအစဈကိုခံစားနားလညျနိုငျတဲ့အရှယျလို့ပဲဆိုရမှာပါပဲ။ဒီတော့ အသကျ ၃ဝအရှယျမှာ မသိမဖွဈသိထားသငျ့တဲ့အရာတှကေိုလညျး လကျလှတျလို့မဖွဈပါဘူး။ဘာတှလေဲဆိုရငျ…
လုပျသငျ့လို့ဆိုတာတှထေကျ အသကျ ၃ဝအရှယျမှာ ကိုယျတကယျပြျောရှငျစှာလုပျခငျြတဲ့အလုပျက ဘာလဲ၊ကိုယျ့ရဲ့နှလုံးသားက ဘယျနရောကိုပိုပွီးအလိုရှိနလေဲဆိုတာ ကိုယျ့စိတျကိုယျသိထားဖို့လိုနပေါပွီ။အဲ့ဒါမှ ဘဝရဲ့ ပြျောရှငျမှုအစဈအမှနျကိုခံစားရမှာပါ။
ဘာပဲဖွဈဖွဈခကျြတတျတယျဆိုရငျတောငျ တဈခွားသူတှထေကျပိုသာတဲ့၊ကိုယျ့အကွိုကျဆုံးဟငျးလြာတဈမြိုးဆိုတာ ရှိသငျ့ပါတယျ။အထူးပေါ့။ကဲ ဘယျလိုလဲသငျယူဖို့အဆငျ့သငျ့ဖွဈနပွေီလား?
*ဘယျသူက တကယျ့သူငယျခငျြးအစဈလဲဆိုတာ နားလညျသငျ့နပေါပွီ
ကိုယျ့အနားမှာဝိုငျးနတေဲ့သူငယျခငျြးတှထေဲက ဘယျသူက ကိုယျ့အပျေါတကယျကောငျးတယျ၊ဘယျသူက ဟနျဆောငျတယျဆိုတာ ခှဲခွားတတျဖို့လိုသလို ကိုယျ့ဘေးနားမှာ မလိုအပျတဲ့သူတှကေိုလညျးဖယျထုတျတတျဖို့လိုပါတယျ။ဘဝရဲ့ အစမှာ သူငယျခငျြးအတုတှမေလိုအပျတော့ဘူးမဟုတျလား
ငယျငယျကတော့ ကိုယျနဲ့ပတျသကျပွီးသူငယျခငျြးမိတျဆှတှေကေိုအသေးစိတျပွောပွတာမြိုးရှိတတျပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေဲ့ ၂၅ ကြျော ၃၀ ဆိုတဲ့အသကျအရှယျမှာတော့ ရငျ့ကကျြစှာနဲ့နထေိုငျသငျ့ပါပွီ။သူမြားကိုပွောပွဖို့မလိုအပျတဲ့အကွောငျးတှေ၊ပွောမပွသငျ့တော့တဲ့အရာတှဆေိုတာ လူတိုငျးမှာရှိပါတယျ။ဒါတှကေို ပါးပါးနပျနပျနဲ့ကိုငျတှယျပွောပွသငျ့ပါတယျ။ကိုယျ့အကွောငျးကို တဈလုံးမခနျြပွောပွတာက ကိုယျ့အားနညျးခကျြကဘာလဲဆိုတာ ခပြွနသေလိုပါပဲ။
ငှကွေေးရှာဖှပွေီး ရလာတဲ့ငှကွေေးနဲ့ ခရီးထှကျတာမြိုးကသာ အတှအေ့ကွုံသဈတှေ၊ခံစားမှုအသဈတှလေကျတှခေံ့စားသိမွငျနိုငျမှာပါ။ရလာတဲ့လစာဝငျငှရေဲ့ ၂ဝရာခိုငျနှုနျးကို အမွဲစုထားပွီး ဘဝရဲ့ အတှအေ့ကွုံခရီးလမျးသဈတှကေို လြှောကျဖို့မမပေ့ါနဲ့။
ကိုယျဟာ အနာဂတျမှာဒီထကျပိုတောကျပဖို့ကွိုးစားနသေူဆိုရငျ အသကျ ၃ဝအရှယျမှာ ယာဉျမောငျးလိုငျစငျကတော့ ပိုငျဆိုငျထားသငျ့ပါပွီ။ကိုယျ့ဘဝရဲ့ အနာဂတျပနျးတိုငျရညျမှနျးခကျြတှကေို တဈခုခငျြးစီကွိုးစားဖနျတီးဖို့လညျးမမပေ့ါနဲ့
ငယျရှယျစဉျမှာ အလုပျတဈခုလောကျနဲ့ပဲတငျးတိမျပမေဲ့ တကယျတမျးအသကျအရှယျတဈနှဈထကျတဈနှဈကွီးလာတာနဲ့အမြှ ကိုယျ့အတှကျတကယျလိုအပျတဲ့ အရာတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ ကိုယျ့ဘာသာသိလာပါတယျ။အဲ့ဒီအခါ အလုပျတဈခုတညျးနဲ့မရတော့ပါဘူး။နောကျထပျ အပိုအလုပျတဈခု၊ဝငျငှရေနိုငျတဲ့တဈခွားအပိုအလုပျတဈခုခုကို သငျ့အနနေဲ့ရှာဖှလောပါလိမျ့မယျ။ဒီလိုစိတျကူးမြိုးမရှိသေးဘူးဆိုရငျလညျး အခုကတညျးက ရှိလိုကျပါတော့။ရလာတဲ့အခှငျ့အရေးတှကေိုလကျလှတျမခံပဲ ကွိုးစားလိုကျပါ
အရှယျရောကျလာတဲ့သူတိုငျးမှာ ကိုယျ့အတှကျသကျတောငျ့သကျသာဖွဈစတေဲ့ ကိုယျပိုငျပုံစံဆိုတာရှိထားဖို့လိုပါတယျ။ကိုယျက ဘယျလိုပုံစံဝတျရတာ သဘောကတြယျ။ဘယျဝတျစုံနဲ့ဆို သကျတောငျ့သကျသာရှိတယျ။ပိုပွီးစိတျလှတျလပျပေါ့ပါးတယျစသဖွငျ့ ကိုယျ့စိတျကိုယျသိအောငျကွိုးစားပါ။အဲ့ဒါမှဘယျလိုအဝတျအစားမြိုးကို ပိုပွီးဝယျသငျ့တယျ။ပိုပွီးရှေးခယျြသငျ့တယျဆိုတာ သိလောမှာပါ။ဒါကလညျး အသကျ ၃ဝဆိုတဲ့အရှယျမှာရှိထားသငျ့တဲ့ ရငျ့ကကျြမှုတဈခုပါပဲ